Origen - I-Biography yoMntu Wensimbi
U-Origen Wayengumfundi weBhayibhile oqaqambileyo kamva wagwetywa njengomntu onobuhedengu
U-Origen wayengumnqweno wokuqala wecawa wayethuthunyiswa ngenxa yokholo lwakhe kodwa wayenokuphikisana naye emva kokufa kwakhe ngenxa yezinye iinkolelo zakhe. Igama lakhe elipheleleyo, u-Origen uAdamantius, lithetha "indoda yensimbi," isihloko esayifumana ngexesha lokubandezeleka.
Nanamhlanje, u-Origen uthathwa njengeqhekeza kwifilosofi yamaKristu. Iprojekthi yakhe yeminyaka engama-28, i- Hexapla , yayingumhlalutyo omkhulu kwiTestamente Elidala, ebhaliweyo ngokuphendula abahlalutyi bamaYuda nabamaGnostic .
Ebizwa emva kweentsika zayo ezintandathu, ithelekisa iTestamente Elidala yesiHebhere, i- Septuagint , kunye neenguqu ezine zesiGrike, kunye neengxelo ze-Origen.
Wakhupha ezinye iimibhalo, wahamba kwaye washumayela ngokubanzi, kwaye wayesebenzisa ubomi bokuzilahla, mhlawumbi, abanye bathi, bezama ukuphepha isilingo . Isenzo sokugqibela sasigwetyelwa ngabemi bexesha lakhe.
Ubungcali bemiSebenzi ekuBaleni
U-Origen wazalelwa malunga ne-185 AD kufuphi neAlesandria, eYiputa. Ngomnyaka we-202 AD, uyise uLeonidas wayenqunywe ikhanda njengomKristu ofela ukholo. U-Origen osemncinane wayefuna nokuba ngumfel 'ukholo, kodwa unina wamgcina ephuma efihla impahla yakhe.
Njengomntwana omdala kunabantwana abasixhenxe, u-Origen wabhekana nesingxaki: indlela yokuxhasa yakhe intsapho. Waqala isikolo segrama waza wongezelela leyo ngeniso ngokukopisha itekisi kunye nokufundisa abantu abafuna ukuba ngamaKristu .
Xa isityebi esiphendukileyo sinikela u-Origen kunye nobhala, intombazana encinci yayilama phambili kwinqanaba lokuphumla, ukugcina abhalisi abasixhenxe bexakeka ngokubhala ngexesha elifanayo.
Wabhala ukucaciswa kokuqala kwe-Christian Teology, kwi- Principles Principles , kunye neCelsus (Contra Celsum), ukuxolisa kulandelelwe enye yezinto ezikhuselekileyo zobukhosi zobuKristu .
Kodwa incwadana yedwa ayanele ngokwaneleyo ku-Origen. Waya kwiLizwe elingcwele ukuba afunde kwaye ashumayele apho.
Ekubeni engazange amiselwe, wagwetywa nguDemetrius, umbhishophu wase-Alexandria. Ngesihlandlo sesibini ebuyela ePalestine, u-Origen wamiselwa ukuba abe ngumbingeleli apho, wabuya wavutha umsindo kaDemetrius, owayecinga ukuba umntu ufanele abekwe esontweni lakhe kuphela. U-Origen waphindela kwiLizwe elingcwele, apho wamkelwa ngu-bhishophu waseKesareya kwaye wayefuna kakhulu njengotitshala.
U-Origen wayenentlonelo yomama wobukumkani waseRoma u-Severus Alexander, nangona umlawuli ngokwakhe wayengengumKristu. Xa elwa nezizwe zaseJamani ngo-235 AD, amabutho ase-Aleksandria aguquka aze ambulale yena kunye nonina. Umlawuli olandelayo, uMaximinus I, waqalisa ukutshutshisa amaKristu, okwenza u-Origen abalekele eKapadokiya. Emva kweminyaka emithathu, uMaximinus ngokwakhe wabulawa, wavumela u-Origen ukuba abuyele eKhesareya, apho wahlala khona kwada kwasuka intshutshiso enobunzima.
Ngo-250 AD, umbusi uDecius wakhupha umyalelo wokulawula umbuso oyalela zonke izifundo ukuba enze umbingelelo wamahedeni phambi kwamagosa aseRoma. Xa amaKristu ayichasa urhulumente, ahlawulwa okanye abulawe.
U-Origen wayevalelwe kwaye wahlushwa ngetinga lokumenza abuyele ukholo lwakhe.
Imilenze yakhe yayisilula ngesifo emasitokisini, wayegula kwaye wayesongelwa ngomlilo. U-Origen wakwazi ukuhlala de deus wabulawa empini ngo-251 AD, waza wakhululwa entolongweni.
Ngokudabukisayo, umonakalo owenziwe. Ubomi bokuqala buka-Origen bokuzimela kwaye ukulimala entolongweni kwabangela ukuhla kwehla kwimpilo yakhe. Wafa ngo-254 AD
U-Origen: IHero kunye neNkohliso
U-Origen wafumana idumela elingathandabuzeki njengomfundi weBhayibhile nomhlalutyi. Wayenguvulindlela wezobuvulindlela odibanisa ingcamango yefilosofi kunye nesityhilelo seZibhalo.
Xa amaKristu okuqala atshutshiswa ngumbuso wamaRoma, u-Origen waxhatshazwa waza wahlukunyezwa, waza waxhatshazwa ngokuzama ukumkhanyela uYesu Kristu , ngaloo ndlela ahlasele abanye amaKristu. Esikhundleni salokho, waba nesibindi.
Nangona kunjalo, ezinye zeengcamango zakhe zaphikisana neenkolelo zamaKristu ezisungulwe. Wayecinga ukuba uZiqu - zintathu wayengumbuso, kunye noThixo uYise emthethweni, ngoko uNyana , ngoko uMoya oyiNgcwele . Inkolelo yama-Orthodox kukuba abantu abathathu kuThixo omnye bayalingana kuzo zonke izinto.
Ngaphezu koko, wafundisa ukuba yonke imiphefumlo yayingalingani kwaye yayidalwa ngaphambi kokuzalwa, yawela kwisono. Kwaye ngoko yayibelwe imizimba esekelwe kwisilinganiselo sesono sabo , yathi: iidemon , abantu, okanye iingelosi . AmaKristu akholelwa ukuba umphefumlo uyadalwa ngokukhulelwa; abantu bahluke kwiidemon neengelosi.
Ukuhamba kwakhe kunzulu kwakuyimfundiso yakhe yokuba yonke imiphefumlo ingasindiswa , kuquka uSathana . Oku kwakhokelela iBhunga laseConstantinople, ngo-553 AD, ukuvakalisa u-Origen ukuba uyamhlonela.
Izazi-mlando ziyavuma uthando luka-Origen uthando lukaKristu kunye neempembelelo zakhe kunye nefilosofi yamaGrike. Ngelishwa, umsebenzi wakhe omkhulu uHexapla wabhujiswa. Esi sigwebo sokugqibela, u-Origen, njengamaKristu onke, wayengumuntu owenza izinto ezininzi kakuhle kwaye ezinye izinto ziphosakele.
> Iipokethi zeMbali yeCawa , uJC Robertson
> Foxe's Book of Martyrs , uWilliam Byron Forbush, umhleli
Ukungcoliseka kwamanzi kwiMlambo neMifula
'I-Adventure yeTom Sawyer' Quotes
IJografi ye-Equator yomhlaba
I-PGA Tour John Deere Classic
Iingelosi kwi-Islam: Hamalat al-Arsh
I-Kilwa Chronicle - Uludwe lweSultan lwesiSwahili
Iimviwo zeeSikolweni zeeSatifikethi seNgxowa-ngxoxo: Iingxowa-mali kunye nemivuzo
UTomas Adams - Imbali yeChewing Gum
I-Biology Prefixes kunye neSuffixes:
Izipho eziPhambili zokuHlanywa kweeNkcukacha zamehlo
Ukufa kweShaka Zulu - 24 Septemba 1828